China Ibhulashi Yesisekelo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ibhulashi Yesisekelo - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 14 ye-Ibhulashi Yesisekelo)
Isisekelo esincane sokuhamba sakha amabhulashi
Isisekelo esincane sokuhamba sakha amabhulashi Le bhulashi leSisekelo elilodwa liyinhlanganisela yemibala emi-3 yezinwele zokwenziwa, izibambo zemvelo zokhuni namashubhu we-aluminium wegolide. Umklamo wobuchwepheshe, ibhulashi elidingekayo ubuciko bokwenza izimonyo nsuku zonke. Uma usunayo, uzokuthanda kuze kube...
Kulula ukuyithwala futhi uyisebenzise.Imnandi futhi I-Stylish; Ikhwalithi ephezulu.Feel ukukhanya futhi ithambile, yakha kalula ukuqeda ukwakheka okucacile nokugqamile. I-SOFT ne-SILKY uma kuthintwa, amabhulashi awubuthuntu futhi abunjwe kahle.Software kodwa aqine ukusebenzisa izimonyo, ama-bristles nawo awaveli...
I-Lable Personable kanye ne-design concealer ibhulashi engcono kakhulu Lable Lable Person and design concealer ibhulashi best nge Vegan design design wood, nge mirror aluminium ferrule, 100% eco-friendly Nano wire izinwele. Le kithi ihlanganisa: · I-Brush Powder: Qedela ukubukeka kwakho ngokufaka uthuli kwelinye...
I-pcs engu-18 ephelele egcwele ibhulashi
ISIFUNDO SOKUPHUMA KWESIFUNDO SOKUQHUBA KWESIFUNDO 18: Kufaka konke okudingekayo ekusetshenzisweni komsebenzi noma ekhaya. Izitayela ze-Kabuki, i-Face Brushes, ama-Brushes ama-Eye, i-Lip brush, i-Foundation Brushes, ihlangabezane nazo zonke izidingo zakho zobuso bakho nesicelo sakho se-makeup. I-PREMIUM SYNTHETIC...
ibhulashi yokwenza elilodwa isethi wholesale
ibhulashi yokwenza elilodwa isethi wholesale Le shayela elilodwa le-powder iyinhlanganisela yezinwele ezimbili ezinamathele zokwenziwa kwezinwele, i-Plastic screw shape shape kanye ne-aluminium Ferrule tube. Umklamo wobuchwepheshe, i -shayela edingekayo ekusebenzeni ubuciko nsuku zonke. Uma usuwakho, uzoyithanda kuze...
Iphathekayo, kulula ukuyithatha ngenkathi uhamba Amabhulashi ayenziwe nge-fibre zokwenziwa zokwenza umsebenzi ohlala njalo 7 I-Pcs Makeup Brushes Setha ifaneleka ukwakheka kwansuku zonke Okubalulekile: Izinwele ezihambisanayo, ithusi, izinkuni Isitayela: Umshini wokushisa, I-Blush Brush, i-Eyeshadow Brush Igama logama...
5pcs Ibhulashi yokwenza i-Vegan isetha eshibhile
5pcs Ibhulashi yokwenza i-Vegan isetha eshibhile FOR brush Powder + BLUSH shayela + HIGHLIGHTER ibhulashi + Chaza ibhulashi + ebalulekile ukushayela crease Le shayela ye-5pcs ye-Vegan ishibhe eshibhile ngemidwebo ye-vegan emhlophe ekukhoneni ngokhuni, nge-mirror aluminium ferrule, izinwele ze-Nano ezinama-100%...
Umbala we-Champion 3pcs ibhulashi usetha izimonyo
Umbala we-Champion 3pcs ibhulashi usetha izimonyo Lokhu lokhu Umbala we-Champion 3pcs ibhulashi usetha izimonyo, lokhu kusetha kudala ubuso obunamathele, izihlathi ezithandwayo ngokwemvelo kanye nezindebe ezithambile ngokubukeka okuncane kodwa okwamanje. Kufaka: Brush Powder Ibhulashi elithambile, elincanyana,...
Ibhulashi Yesisekelo Ibhulashi yesisekelo I-Brush yesisekelo Izisekelo Zamabhulashi Esisekelo Ibhulashi Isethe Oval Ibhulashi Hlela ukulungiselela Ibhulashi le-Blend Ibhulashi isethelwe ubuso bebuso